Mpanakanto Syriana Mamisavisa Ireo Mpitarika Matanjaka Erantany Ho Toy Ny Mpitsoa-ponenana Marefo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2017 4:15 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Français, Español, Esperanto , Português, 繁體中文, عربي, čeština , 简体中文, English
‘Ny Filaharana’ nataon'i Abdalla Al Omari. Sary tao amin'ny pejy Facebook -n'i Al Omari. Nahazoana alàlana.
Miaraka amin'ny sarin'ireo mpitsoa-ponenana “marefo” izay mibahana ny tati-baovao, maniry ny hamadika ny zava-misy ilay mpanao hosodoko Syriana Abdalla Al Omari sy hampiseho amin'izao tontolo izao fa marefo mitovy amin'izany ireo mpanao politika matanjaka raha toa ka tsy nanam-bitana izy ireo.
Miditra amin'ny “The Vulnerability Series” .
Tao Bruxelles, Belzika, no nandefasany voalohany ny andian-tsary tamin'ny taona 2016 izay toerana nahazoany fialokalofana ary namerina nandefa izany indray tany Dubai izy, izay nifarana tamin'ny 6 Jolay 2017 .
Lokomenaka sy acrylique amin'ny lamba soga
Ho Hitanao amin'ny 08/03/2017 ao amin'ny @CcStrombeek,Belzika
Nanazava ny antony nandrisika azy tamin'ilay andian-tsary i Omari :
Na dia tsy mahalala firy ny momba ny tontolon'ireo mpitarika aza aho, nampianatra ahy bebe kokoa mihoatra noho ny noeritreretiko ny fotoana mangina niarahako tamin'izy ireo tsy voatanisa. Mety ho lasa marefo ny manamora foana ny zava-drehetra mendrika harovana , ary mety hanome anao ny hery lehibe indrindra ny fotoanan'ny faharesena tanteraka .
Ny handrava ny endriky ny tanjaka no hevitra tiana hambara . Nolazainy tamin'ny antsipiriany tao amin'ny bilaoginy ny nahatonga azy ho nangoraka ny filoha Syriana Bashar Assad izay natao fahirano, ary nanana miaramila voampanga tsy tapaka ho nanao heloka bevava an'ady sy mandrava ny maha-olombelona:
Na dia ny tenako aza dia mangoraka an'i (araka ny fomba fijeriko) Assad . Tsy manana afatsy ny fahalemena isika hifikirantsika ato amin'ity tontolo tsy misy hery mampijoro ity. Manome havesarana ato anatintsika ny rivotra tsy hita maso, kanefa, mahagaga fa mbola mijoro hatrany isika . Nandresy lahatra ny tenako aho fa izany no fitaovam-piadiana matanjaka indrindra ananan'ny olombelona, tena fomba mahery vaika kokoa noho ny fahaizana mandaha-teny, ny lavaky ny baomba sy ny bala izay ao anatin'ny fahatsiarovana iraisantsika. Fanomezana tokony hankalazaintsika rehetra ny fahalemena.
Tao anatin'ny antsafa niarahana tamin’ i De Afspraak avy any Belzika, nilaza i Omari fa mahatsapa ity “fangorahana hafahafa” ity ihany koa izy amin'ireo mpanao politika hafa:
Isan'andro, mifoha miaraka amin'izy ireo aho sy mahita azy ireo eny amin'ny rindriko .. Ary nisy ny fotoana nahatsapako ity fangorahana hafahafa ity ho azy ireo rehefa nahita azy ireo nandritra ny fotoana naharitra aho. Ary ity fangorahana ity rehefa mijery anareo sy manatri-maso anareo amin'ny fotoana rehetra, dia milaza aminareo fa ‘ marefo isika’, malemy isika, izy ireo ihany koa, ary nanana ity fahatsapana ity aho hoe ‘oay, tena mangoraka azy ireo aho’.
Ankoatra an'i Assad, mampiseho ny Filoha Amerikana Barack Obama sy Donald Trump, ny Filoha Rosiana Vladimir Putin, ny Filoha Frantsay Nicolas Sarkozy sy François Hollande, ny Filoha Iraniana Mahmoud Ahmadinejad, ny Filoha Tiorka Recep Tayyip Erdogan, ny Praiminisitra Britanika David Cameron, ny Sojabe Alemà Angela Merkel ary ny Filoha Egyptiana Abdel Fattah el-Sisi ny andian-tsary.
“Maniry manokana ny hahita azy ireo .eo amin'ny toeran'ireo mpitsoa-ponenana aho, ho olona marefo ary ho hita eo anatrehan'ny fangorahana satria toa tonga lafatra foana ny mijery azy ireo, tena mahery”, hoy izy tamin'i De Afspraak.
Ny sariny mampiseho an'i Trump ho mpitsoa-ponenana izay nozaraina betsaka dia avy amin'ny aingam-panahin'ny tantaran'ilay mpitsoa-ponenana Palestiniana Syriana Abdul Halim Attar.
Nahazo tati-baovao i Attar, avy any amin'ny toby Yarmouk ao Damaskosy, ary iray amin'ireo mpitsoa-ponenana Syriana mihoatra ny iray tapitrisa izay nandositra tany Libanona rehefa nivarotra penina tao Beirota izy sady mitrotro ny zanany vavy. Manao ny akanjo mitovy amin'ilay zanakavavin'i Attar ny zazavavy izay trotroin'i Trump eto .
‘The Vulnerability Series’ avy amin'i Abdalla Al Omari tao amin'ny Facebook. Nahazoana alàlana.
Namelona indray ity sary malaza ratsin'ny mponina tao Yarmouk milahatra sakafo tamin'ny taona 2014 ity ihany koa izy:
Loko acrylique amin'ny lamba soga.
Nahasarika saina maro tao amin'ny aterineto ny sanganasan'i Omari. Nahazo mpijery maherin'ny 12 tapitrisa ny lahatsary iray avy amin'i AJ+. Ao anatin'izany, milaza izy fa “ireo mpitarika ireo no anisan'ny tompon'andraikitra tamin'ny fifindra-monin'ny Syriana. Angamba mety hahatsapa izy ireo hoe tahaka ny ahoana izany hoe marefo. “
Nanolo-kevitra ny handeha lavidavitra kokoa momba ny famisavisana ireo sarin'ny mpitondra manerantany i Mary Scully, izay efa kandidà mahaleontena sosialista ho filoham-pirenena Amerikana ;
Misy ny fomba iray hafa tsaratsara kokoa mba hanehoana azy ireo; miaraka amin'ny fanamiana any am-ponja rehefa avy nenjehin'ny fitsarana noho ny heloka mandrava ny maha-olombelona .